Gawaarida Sapanca Cable waxay keenaan Banaanbax! Ilaaliyaha ayaa sii wadaya ilaa mashruuca la joojinayo | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaGawaarida Sapanca Cable waxay keenaan Banaanbax! Ilaaliyaha ayaa sii wadaya ilaa mashruuca la joojiyo
06 / 01 / 2020 54 Sakarya, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
Burburka gawaarida sapanca cable wuxuu keenay nobet drive illaa mashruuca la joojinayo
Halganka looga soo horjeedo mashruuca jidadka ee dadka deggan xaafadaha Kırkpınar ee xaafadaha degmada Sapanca ee Sakarya ayaa socday muddo 120 maalmood ah.
Wargeyska CumhuriyetSida ku xusan warkii Hazal Ocak; Dadka daggan gobolka waxay galeen sanadka cusub teendhadii ay degeen kasoo horjeedda xarunta hoosaadka fiilada. 120 qof oo ka mid ah dadka gobolka ayaa gaaray maalintaas, "mashruucu ma joogsan doono illaa la joojiyo," ayuu yidhi.
Bishii Agoosto 2018, qandaraaska mashruuca gawaarida fiilada ee Degmadda Sapanca ayaa la bilaabay. Mashruuca gawaarida fiilada, kaas oo ka bilaabay Kırkpınar Neighborhood, waxaa la wareegay Bursa Teleferik AŞ iyadoo leh 25 sano oo ah qaab wareejin-ku-wareejin ah. Agaasinka Degmooyinka ee Deegaanka iyo Magaalooyinka waa laga saaray mashruuca hanaanka Qiimeynta Saamaynta Deegaanka "Etki". Meesha ay ku taallo saldhigga ugu sarreeya fiilada korantada, waxaa jiri doona tas-hiilaad sida 30 bungalool, makhaayado dalka iyo qaxwada dalka Xarumahan ayaa waxaa dhisi doona shirkada diyaarineysa mashruuca waxaana shaqeyn doonta 25 sano. Meesha la dhigto waxaa ku yaal baarkin. Marka la eego baaxadda shaqooyinka, geedo badan ayaa lagu daadiyay xarunta hoose ee gaadhiga fiilada. Burburkii saldhigga ugu sarreeyay ee fiilada korantada ayaa laga muujiyay sawirrada.
Ogeysiinta Qandaraaska: Dayactirka iyo Dayactirka Agaasinka Diyarbakır iyo Ilaalada Gobolka…
Beddelaadda qalalaasaha TÜVASAŞ
Is-beddelka Qalal-celinta Istaraatiijiga Meelaha Dhulka
4 Dhibaatooyinka Gaadiidka Soodhaweynta Bil walba ah ayaa ka bilaabmaya Ankara
Sirkeci Halkalı Cusboonaysiinta xawaaraha tareenka 6 waxay socon doontaa bilo
Inta u dhaxaysa Ankara - Istanbul YHT iyo 3 waxay socon doontaa nus saac
Sapanca saldhigga sare ee gaadhiga fiilada